Qalabka laydhka ee gaarka ah, kuwa sameeya iftiinka iftiinka | Huayi Iftiin
Sida mid ka mid ah 10-ka shirkadood ee ugu sarreeyaSoo saaraha iftiinka LED, Huayi Lighting wuxuu diiradda saarayaa naqshadaynta iftiinka iftiinka LED-ka iyo tayada, wuxuu bixiyaa nalalka LED-ka ee qolka, nalalka LED-ka ee saqafka, laydhka iftiinka LED. Huayi Lighting waxa ay samaysay in ka badan 200 oo injineero xirfad leh si ay u ballaadhiyaan awooddayada taageerada alaabooyinka kala duwan. Ku sii wad maalgashiga R&D oo leh tignoolajiyada horumarsan si loo hubiyo tayada badeecada sare taas oo noo ogolaanaysa inaan la kulano macaamiisha weydiimaha. Huayi Lighting wuxuu bixiyaa faylal kala duwanXalalka iftiinka LED u adeegida dhawr codsi iyo deegaan, nalalka hagaaya, oo ay ku jiraan xafiisyada ganacsiga, warshadaha, muuqaalka, jidadka, naqshadaha, iwm, waxaanu inta badan wax ka qabanaaIftiinka Qurxinta iyo Light Architectural, oo ay ku jiraan iftiinka Pendant warshadaha, iftiinka qaabka warshadaha, iftiinka qaabka casriga ah, iftiinka hakinta dhalada,iftiin la habeeyeyiyo taxane kale oo tayo sare leh, kaalay oo soo iibso.
Nalalka Akhriska LED
Guddi taabasho saddex-badhan ah